တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. မျက်နှာပြင်မှန်ဘီလူးသည်သန့်ရှင်းရေးဆပ်ပြာ, Eco Friendly သန့်ရှင်းရေး Solutions, ဆပ်ပြာကမ်းလှမ်းရန်
ဖေါ်ပြချက်:ဆပ်ပြာပျော်စေ,Eco Friendly သန့်ရှင်းရေး Solutions,Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ဆပ်ပြာ,Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ > Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်
Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဆပ်ပြာပျော်စေ, Eco Friendly သန့်ရှင်းရေး Solutions ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ဆပ်ပြာ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
HFE Good electrical insulation detergent for Screen lens  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HFE လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာမျက်နှာပြင်မှန်ဘီလူး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီသန့်စင် forScreen မှန်ဘီလူး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် HFE poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် HFE Environmental -friendly သန့်စင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးအဘို့အနိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက်သင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် 54 ℃ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက်လွယ်ကူသောတည်ငြိမ်မှုမကြွင်းသောဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက်အရောင်မဲ့, သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် HFE hydrofluoroether Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HFE Good electrical insulation detergent for Screen lens The packaging, storage and transportation: This Cleaning Solution For Screen Lens is packed with 25kg/barrel, or for customer customization, easily stored and transported. Hydrofluoroether...
HFE လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာမျက်နှာပြင်မှန်ဘီလူး Hydrofluoroether ဆပ်ပြာတစ်ဦး Eco-friendly အရည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာသည်ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်,...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် Hexafluoropropyl methyl အီ Cleaner HFE (hydrofluoroether) အနေနဲ့အရည်ဓာတု, အလွန်အမင်းနိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု, အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့, ကျန်ကြွင်းများနှင့်ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲလွယ်ကူသောတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်။...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် HFE Hydrofluoroether Environmental -friendly သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် အဆိုပါ Hydrofluoroether HFE ဆပ်ပြာမဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်သော - နာကျင်ကျိန်းစပ်, အရောင်မဲ့,...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးအဘို့အနိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ <100ppm ရေအကြောင်းအရာဒါဟာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးသည်တစ်ဦး Eco ဖော်ရွေထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် Hydrofluoroether သင့်လျော်ပြုတ်ပွိုင့်ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydrofluoroether...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် Hydrofluoroether လြယ္ကူမတည်ငြိမ်သောအဘယ်သူမျှမ-ကျန်ကြွင်းဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်, မျက်နှာပြင်မှန်ဘီလူးအဘို့အလြယ္ကူမတည်ငြိမ်သောဆပ်ပြာဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာအရောင်မဲ့,, poisonless...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက်အရောင်မဲ့, သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydrofluoroether...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် HFE hydrofluoroether Non-burst Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်,...
တရုတ်နိုင်ငံ Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ပေးသွင်း
တတိယမျိုးဆက် CFC အစားထိုးအဖြစ် Hydrofluoroether, အ ODP သုညဖြစ်ပါသည်, GWP နိမ့်သည်ကို၎င်း, လေထုနေအိမ်သို့အချိန်တိုတိုဖြစ်ပြီး, အနိမ့်အဆိပ်အတောက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမချေးမရှိလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိမီးခိုးမျိုးဆက်, ကောင်းသောပစ္စည်းလိုက်ဖက်တဲ့, etc.It ကျယ်ပြန့်အတွက်အသုံးပြုသည် ထိုကဲ့သို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, အီလက်ထရွန်နစ်, သတ္တု, တိကျတူရိယာ, optical မျက်ကပ်မှန်, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အာကာသအဖြစ်အများအပြားလယ်ကွင်း။ တစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ်, hydrofluoroether အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုရှိပါတယ်, တစ်ပုံစံတည်းပြန့်နှံ့ဖို့လွယ်ကူပြီးစိုစွတ်သောဖြစ်တယ်, အလျင်အမြန်ခန်းခြောက်ဖို့လွယ်ကူသည်, Non-မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့, ကောင်းသောပစ္စည်းလိုက်ဖက်တဲ့ရှိပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းပိုမိုပါးလွှာအဘို့အ Excellent က။
ဆပ်ပြာပျော်စေ Eco Friendly သန့်ရှင်းရေး Solutions Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ဆပ်ပြာ Screen ကိုမှန်ဘီလူးသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် တစ်ဦးကားပျော်စေ